तिमी मुस्कुराउँदै गर प्रियतम « Nepal – the country of the Buddha and the Mt. Everest
उदाहरणीय प्रेम मार्फत लाखौं नेपालीलाई रुवाउने जोडी: नेपाल आइडलको सिजन २ मा पुष्पन प्रधानको 'पंक्षी' गीत अमित बरालले… twitter.com/i/web/status/1…4days ago
कुलमान घिसिङ दोषीको दोष कोट्याउनै नचाहनुको कारण के हुन सक्छ? ramkshrestha.wordpress.com/2018/12/23/kul… https://t.co/oF8mhScMa83weeks ago
श्रृंखला र मेलबर्नको सम्बन्ध के? ramkshrestha.wordpress.com/2018/12/23/%e0… https://t.co/ynAbSboO1I3weeks ago
Australian Federal MP Joanne Ryan’s wonderful powerful video message promoting Nepal as birthplace of Lord Buddha a… twitter.com/i/web/status/1… 1 month ago
सात देशको पाठ्य पुस्तकमा भएको गल्ती सच्याउने कामको पहल ramkshrestha.wordpress.com/2018/12/01/%e0… https://t.co/BYSiSdtdqr 1 month ago
Magnificent Introduction Video from Nepal for Miss world 2018 contestant with concise information to promote Nepal.… twitter.com/i/web/status/1… 1 month ago
अमित बरालले जुन "पंक्षी" गीत मार्फत सबैलाई रुवाए, अत्यन्तै ओजिला शब्दहरु मार्फत मान्छेका मन मस्तिस्कलाई तरंगित तुल्… twitter.com/i/web/status/1… 1 month ago
बिबिसी लण्डनको World Ranking मा एआर रहमानको दशौं स्थानमा आएको छैया छैया गीतका लागि सो परिणाम आएको १० मिनेटभित्र भार… twitter.com/i/web/status/1…2months ago
९ बर्षकै उमेरमा आफ्नै शब्द, संगित, र स्वरमा गीत प्रसारण गराउने नेपाली सांगितिक दुनियाँकै महारथी दीपक जंगम नेपाली आइ… twitter.com/i/web/status/1…2months ago
नेपाल आइडल सेसन २ को २७ औं एपिसोडमा बाँकी रहेका आठै प्रतिस्पर्धीहरु बिभिन्न नेपाली भेषभुसामा सजिएर लोकगीत बिशेष एपि… twitter.com/i/web/status/1…2months ago
हिजोको "SA RE GA MA PA" TOP 15 Grand Premiere मा पनि मेनुकाको प्रस्तुति बेजोड नै रहेकोले अब उनी अर्को राउण्डमा प्र… twitter.com/i/web/status/1…2months ago
नेपाल आइडलबाट बहिरिएकी Menuka Poudel भारतको अत्यन्तै लोकप्रिय सांगितिक कार्यक्रम भारतीय ZeeTv show SA RE GA MA PA… twitter.com/i/web/status/1…2months ago
आफ्नो बेजोड भावनात्मक प्रस्तुतिका कारण सुसान खत्रीले भारतीय फिल्म जगतमा सबैभन्दा महंगो कलाकरमध्यीकी एक काट्रिनालाई… twitter.com/i/web/status/1…2months ago
हराएका हिरा ६: सानो जहाज बनाउँदै गरेका सरोजले हेलिकप्टर बनाएर उडाएका छैनन ramkshrestha.wordpress.com/2018/10/27/%e0… https://t.co/YUcpZ8aFaB2months ago
सार्क बिस्तार प्रसंग र नेपाली परिबेश
« 10 Things Extraordinary People Say Every Day
After Successful Missile Launch, North Korea Threatens New Nuclear Test »
आफ्नो बिजिनेस बढन थालेपछि अरुलाई संयुक्त रुपमा काम गर्न लगानी गर्न लोभ्याउन सजिलो भयो । अरुलाई लगानी गर्न लगाएको पैसामा आफू डाइरेक्टर भएको तलब पनि लिने र अफिसको खर्चमा पनि शेयर गर्न लगाएर केही बर्षपछि ब्यापार घाटामा गएको देखाएर उस्लाई समका सम दिएर बिजिनेस बेच्दा घाटामा गएको बिजिनेसमा पनि लगानी गरेको सबै फिर्ता दिएको भनेर उता ऊ मख्ख यता यत्तिका बर्ष उस्को पैसा निर्ब्याजी लगानी गर्दै त्यसबाट तलब खाएको र अफिस खर्च गर्न पाएकोमा आफू मख्ख, नदेखिने गरी गरिने फायदाको त कुरो छँदै छ । ब्यापारमा उकालो लाग्न थालेपछि त गजबै पो हुने रहेछ बा । आजकाल त सामाजिक कामहरुमा अवस्था हेरी सानो ठूलो चन्दा दिन समेत शुरु पो गरेको छु त ।
म आफूले साझेदारी गर्न प्रस्ताब गर्नुभन्दा बढी अरुहरु नै मसंग साझेदारी गर्न लालायित हुन्छन आजकाल त मलाई सफल ब्यबसायी ठानेर । यसरी आउँदा अरु थोरै लगानी गर्नेहरुलाई कबुल गरेको पुरै पैसा पहिला नै चुक्ता गर्न लगाउँछु, म भने बढी लगानी गर्ने कबुलेर पहिला अरुबाट चुक्ता गरेको पैसा प्रयोग गर्दै आफू भने डाइरेक्टर भए बापत लिने तलब र सुबिधाबाट बिस्तारै शेयर चुक्ता गर्दै जान्छु । त्यसमाथि आफ्नै ठूलो शेयर भएको बैंक पनि भएकोले उनीहरुको शेयर त्यसैमा डिपोजिट गर्न लगाउने गर्छु र आफूले कबुल गरेको लगानी गरे नगरेको कुरो आफ्नै बैंक मार्फत अलि अलि चलखेल गर्न समस्या पनि हुँदैन । त्यस्तै परे शुरु गरिएको सोही कंपनी देखाएर अन्य लगानीकर्ताहरुले डिपोजिट गरेको पैसा नै लगानी गर्न पनि समस्या भएन । आखिर गरीबले सुन लगाए पनि नक्कली र धनीले लगाए नक्कली मोती पनि सक्कली हुने न हो – मेरो यथार्थता जे भए पनि मसंग पैसोको खानी नै छ भन्ने भ्रम अरुहरुमा छँदै छ । कहिलेकांही आफूले तिर्नु पर्नेलाई उल्टै आफूले लिनुछ भन्दा पनि धेरैले मेरै कुरालाई सही भन्ने अवस्था पनि बनाइसकेको छु । अवस्था हेरी त्यस्तै परे कहिलेकांही कम्पनी लिक्विडेशन गराएर फायदा लिने पनि गरेको छु । त्यस्तो गर्दा दोष जति कि त अरुलाई कि त सिर्जित परिस्थितिलाई दिने गरेको छु । के भयो र, हैसियत बनाइसकेपछि त जे भने पनि जे गरे पनि आँफै माथि पर्न सकिने रहेछ ।
आजकाल पत्र पत्रिका, रेडियो र टिभिहरुले मेरो त अन्तरबार्ता लिन समेत लालायित छन । मैले केही महिनाभित्र मलाई यहाँ सम्मान गरिंदा बनाएर पठाएका दुई क्लिपहरुबारे बताएको थिइन । के तिमीले केही अनुमान गर्यौ? ती दुबै सम्मान म आँफैले आफ्ना मान्छेहरुलाई आबस्यक सबै खर्च दिएर आँफैले गर्न लगाएका सम्मानहरु हुन । त्यस्कै करामत हो आज यी तमाम संचारकर्मीहरु मसंग नजिकिनुको रहस्य । मेरो बिरोधमा कामदारहरु भाँडन खोज्नेको गाउँमा केही काम गर्न सानो रकम के दिएको थिएँ, यू-टर्न भैहाले । पछि फेरि सहयोग गर्ने आस्वासन दिएको थिएँ, उनीहरु त मलाई सम्मान गर्न चाहेको तर सामर्थ्य नभएको कुरो गरेपछि गोप्य रुपमा आँफैले खर्च दिएर सम्मान गर्न लगाएँ । उता पहिलादेखिका आफ्ना समर्थकहरु अत्तालिन थालेको बुझेर पुन: त्यही सूत्र लगाएर उनीहरुबाट पनि सम्मान लिएँ ।
यहाँका अन्य मानिसहरु एउटै पार्टीका नेताहरुको मात्रै पछि लाग्छन, तर म त जुन पार्टीको प्रभाबशाली नेता आए पनि खुशी बनाएर पठाइदिने गर्छु । उनीहरुको मान्छेहरुलाई ल्याएर काम लगाइदिने र प्रत्येक पार्टीलाई सानो ठूलो चन्दा दिने गर्छु । त्यसैले प्रत्येक ठूला पार्टीसंग राम्रो सम्बन्ध छ मेरो । सबै पार्टीका नेताहरुसंग मेरो नियमित संपर्क हुने गर्छ । नेपालमा नदेखिने किसिमले बिदेशीहरुको पैसाको खोलो बगेको छ र ठाउँ ठाउँमा दह बनेका छन । ती दहहरु नेपालमा असुरक्षित हुने भएकोले हामीसंग मिलेर काम गर्न धेरै तयार छन । यसरी बिदेशबाट नदेखिने गरी नेपाल भित्रिएका रकमको खोलो यसरी बिदेश नै फर्किंदै छ । यसरी नेपाल भित्रिएको पैसा नेपाल बनाउन होइन नेपाललाई बिदेशीहरुको क्रिडास्थल बनाउँदै नेपाललाई कम्जोर बनाउने काममा जिम्मेवार देखिन्छ । त्यसैले अब मेरो बिजनेस गर्मीले हपहप्ती हुने मरुभूमिमा मात्रै सीमित नराखेर बिभिन्न देशमा बिस्तार गर्ने क्रममा छु ।
नेपालबाट आफ्ना सबै काम बिना रोकटोक गराउन बिभिन्न महत्वपूर्ण ठाउँहरुमा आफ्ना मान्छेहरु राख्न शुरु गरेका छौं । थाहा छ गत महिना हामीले दुई महत्वपूर्ण ठाउँको प्रमुखमा मेरा सहपाठीहरुलाई पदोन्नति गराउन सफल भएका छौं । यो क्रम जारी रहनेछ । जुन पार्टेको सरकार भए पनि मेरो सुनुवाई नहुने भन्ने कुरै छैन । नेताहरु देश चलाउँछन हामी नेताहरु नचाउँछौं । आखिर इमान्दार नेता र कार्यकर्ताको गुन्जाइस कुन पार्टीमा पो छ र ? बुद्धको देशमा जन्मसिद्ध पाएको कुर्सी छोडेर जंगल जाने नयाँ बुद्ध फेरि के जन्मेलान र ? पाउनै नपर्ने कुर्सी जसरी पनि हात कसरी लगाउने भन्नेभन्दा बढी कसैको पनि दिमागमा भएको आभास हामीले गर्न सकेका छैनौं । यो हाम्रो लागि अत्यन्तै राम्रो अबसर हो ।
अहिले रातको १२ बजेको छ । नेपालबाट एकजना बरिस्ठ नेताको फोन आएको छ । त्यसैले आगामी पत्रमा थप लेख्ने बाचा गर्दै अहिलेलाई बिदा !
तिम्रो मुस्कुरावट कायम गर्दै सपना पुरा गर्न प्रतिबद्ध तिम्रो उही
This entry was posted on January 26, 2013 at 1:56 pm	and is filed under लेख/ रचना /निबन्ध. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.